AHOANA NO HIKAPOHANA NY EFIJERY AMIN'NY LAPTOP WINDOWS 8 - WINDOWS - 2019
Ahoana ny fandikana ny efijery amin'ny Windows 8
Mpampiasa maro no manontany tena ny amin'ny fomba hanodinana ny efijery amin'ny solosaina na ordinatera amin'ny Windows 8. Raha ny marina, ity dia tena tsara tarehy, izay tena ilaina ny mahafantatra. Azonao atao, ohatra, azonao jerena amin'ny aterineto amin'ny aterineto, raha ilaina. Ao amin'ny lahatsorantsika dia hijery fomba maro hanodinana ny efijery amin'ny Windows 8 sy 8.1 isika.
Ahoana no hifehezana ny efijery laptop amin'ny Windows 8
Ny fiodinana rotaka dia tsy ao anatin'ny Windows 8 sy 8.1 - ny tompon'andraikitra amin'ny ordinatera dia tompon'andraikitra amin'izany. Ny ankabeazan'ny fitaovana dia manohana ny fihodinan'ny sarimihetsika, saingy mbola mety manana olana ihany ny mpampiasa sasany. Noho izany dia heverintsika ny fomba telo ahafahan'ny olona mamadika ilay sary.
Fomba 1: Mampiasà fikandrana
Ny safidy mora sy haingana indrindra ary mora kokoa dia ny manodina ny efijery amin'ny fampiasana hotkeys. Tsindrio ireto bokotra telo manaraka ireto:
Ctrl + Alt + ↑ - avereno miverina amin'ny efi-drakitra ny efijery;
Ctrl + Alt + → - mametaka ny efijery 90 degre;
Ctrl + Alt + ↓ - mihodina 180 degre;
Ctrl + Alt + ← - hametahana ny efijery 270 degre.
Fomba 2: Sary amin'ny Graphics
Saika ny finday rehetra dia manana karatra graphics misy avy amin'ny Intel. Azonao atao koa ny mampiasa ny Intel Graphics Control Panel
Ao amin'ilay fitoeran-javatra, tazano ilay icon Intel HD Graphics amin'ny endriky ny solosaina. Kitiho eto ary mifidiana "Karazan-tsoratra".
Select "Main Mode" apps ary tap "OK".
Ao amin'ny tab "Display" mifidiana singa "Settings fototra". Amin'ny sakafo miainga "Fihodinan'ny" Azonao atao ny mifidy ny toerana misy ny efijery. Dia kitiho ilay bokotra "OK".
Amin'ny alàlan'ny fampiharana ireo hetsika voalaza etsy ambony ireo, ireo tompon'ny AMD sy NVIDIA dia afaka mampiasa pejiny manokana ho an'ny sehatr'asa.
Fomba 3: Amin'ny alàlan'ny "Fanaraha-maso Control"
Azonao ampiasaina ihany koa ny fampiasana ny efijery "Control Panel".
Misokatra aloha "Control Panel". Ampiasao izany amin'ny fampiasana ny fikarohana na amin'ny fomba hafa fantatrao aminao.
Ankehitriny ao amin'ny lisitry ny zavatra "Control Panel" find the item "Screen" ary tsindrio eo.
Ao amin'ny sakafo eo ankavia, kitiho ilay singa "Manetsa ny fampisehoana ny rindrina".
Amin'ny sakafo miainga "Orientation" misafidy ny toerana sy ny milina fanoratana "Ampiharo".
Izay ihany. Hitanay fomba telo azonao andramana ny laptop. Mazava ho azy, misy fomba hafa. Manantena izahay fa afaka manampy anao.